चिनाउन सके पंचकोशी क्षेत्र नेपालकै पहिलो गन्तब्य हुनेछ ः तिर्थयात्री | Jwala Sandesh
| प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २८, २०७२ ::: 524 पटक पढिएको |
दैलेख, पौष २८ – दैलेखमा रहेको पंचकोशी तिर्थस्थललाई चिनाउन सकेमा नेपालमै पहिलो तिर्थस्थल हुने विदेशी तिर्थयात्रीहरुले दावी गरेका छन् । पंचकोशी तिर्थमा आएका विदेशी तिर्थयात्रीले तिर्थ पुरा गरेपछि यहाँको धार्मीक क्षेत्र सवैको नजरमा आर्कषण रहेको दावी तिर्थयात्रीहरुले गरेका हुन् ।
पंचकोशी तिर्थमा आएका अमेरिकन नागरिक विलियम पि. फोक्र्सले पंचकोशीका बारेमा बोल्दै
पंचेकाशी क्षेत्र महत्वपूर्ण, सुन्दर र निकै राम्रो रैछ अमेरिकन नागरिक तथा तिर्थयात्री विलियम पि. फोब्र्सले दैलेख सदरमुकाममा रिपोर्टर्स क्लव दैलेखले गरेको पंचकोशी क्षेत्रको अवस्था विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा भने, यहाँ धार्मीक तथा बैज्ञानिक दुवै पर्यटकहरुका लागि खुल्ला ऐना झै छ । पत्रपत्रिकामा आफुले यहाँको धार्मीक क्षेत्रका बारेमा पढ्दै आएपछि अहिले घुम्ने अवसर पाएर धन्य भएको उनले बताए । पहिलो पटक यहाँको तिर्थ गरेर आफुले धेरै कुराको अनुभव गरेझै लाग्यो । विदेशी तिर्थयात्री फोब्र्सले भने, प्रचारप्रसार गर्न सके नेपालकै पहिलो तिर्थस्थलका रुपमा चिनिने छ । धार्मीक क्षेत्रमा प्रकृती मनमहोक दृश्य कम्ती राम्रो छैन् । यहाँ आउने सवैले आफुले तिर्थ दोहोराउने छन् र अरुलाई पनि आउन प्रेरित गर्नेछन् । पंचकोशी रुचीपूर्ण, खोजपूर्ण तथा मनको शान्तीका लागि आउनैपर्ने स्थान भएको उनको भनाई ।
पंचकोशी क्षेत्रको १० वर्षदेखी प्रचारमा एक्लो रुपमा चिनाउन लागेका धार्मीक सांस्कृती तथा ऐतिहासका जानकार विश्व केसीले अहिले जिल्लाबासीहरुकै सहयोग पाएमा खुसी छन् । दैलेखलाई चिनाउन कुनै पनि कुराको अपुग छैन् । ऐतिहासका जानकार केसीले भने, २५ जातजातिको उद्गम स्थलदेखी धार्मीक, सांस्कृतीक तथा ऐतिहासिक स्थलका साथै प्राकृतिक सुन्दरता समेत छ । नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेखदेखी जलवायूले साथ दिएको सल्लो र साल समेत दैलेखमा एकै ठाँउमा देख्न सकिने केसीको भनाई थियो । दुल्लुमा रहेको किर्तिखम्वले खस राज्यको ईतिहास समेत चित्रण गरेकाले यहाँ आउनेहरुका लागि दैलेख सिक्ने थाले भएको केसीले बताए ।